सडकभरि सरकार ! अन्त पनि देखिएला भन्ने डर ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सडकभरि सरकार ! अन्त पनि देखिएला भन्ने डर !
मंसिर १५, २०७५ शनिबार ८:४०:४९ | मिलन तिमिल्सिना
प्रधानमन्त्रीले छाती ठोकेर भन्नुभयो – अब जता हेर्यो त्यतै सरकार देखिन्छ । त्यसको भोलिपल्टै सडकभरि सरकार देखियो । जताततै सरकार नै सरकार भएपछि नागरिकले हिँड्न पाएनन् । गाडी चढ्न पाएनन् ।
आफू हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सरकार हिँडेपछि, आफू गुड्नुपर्ने ठाउँमा सरकार र उनीहरुका पाहुना गुडेपछि नागरिकले पालो आउने कुरा पनि भएन । जोर र बिजोरले कामचोरलाई मस्ती भयो, सोझासिधा नागरिकलाई सास्ती भयो । तर यसलाई सास्तीको रुपमा होइन, सरकार देखिएको उपलक्ष्यमा उत्साहको रुपमा लिनुपर्छ ।
त्यसमाथि आफू देखिएको प्रमाणित भयो भन्ने ठानेपछि सरकारले जोरबिजोर प्रणाली हटायो । जोरबिजोर लगाउँदा पनि सरकार देखियो, बीचमै हटाउँदा पनि सरकार देखियो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाईअनुसार अब सबैतिर सरकार पुग्छ । भान्सा कोठामा सरकार ! सुत्ने कोठामा सरकार ! हिँड्ने बाटोमा सरकार ! खेतबारीको पाटोमा सरकार ! चोक चौतारोमा सरकार ! धारा पँधेरामा सरकार ! वन जंगलमा सरकार । मेलापातमा सरकार । दोबाटो, चौबाटो, मूलबाटो जताततै सरकार ! यता फर्के पनि सरकार, उता फर्के पनि सरकार !
यतिसम्मका ठाउँमा सरकार देखिए त त्यति फरक नपर्ला । तर मन्त्रालयमा देखिने सरकार शौचालयमा समेत देखियो भने ! मिटिङ रुममा मात्रै होइन, बेडरुममै सरकार भेटियो भने ! सेटिङ स्पटदेखि डेटिङ स्पटसम्म सरकारले देख्यो भने !
ठूलाबडा चाहार्ने तारे होटलमा मात्रै होइन, केटाकेटी लुकीचोरी भेट हुने होटलमा समेत सरकार देखियो भने ! देखिन नपर्ने ठाउँमा सरकार भेटियो भने ! अर्थात कसैले देख्न नहुने ठाउँमा सरकारले देख्यो भने ! प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर धेरै मान्छेको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ ।
देखिन नपर्ने ठाउँमा सरकार देखिएला भन्ने चिन्ता मात्र कहाँ हो र ! सबैभन्दा बढी त सरकारले नदेखी नहुने ठाउँमा साँच्चै सरकार देखियो या सरकारले देख्यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता पो छ !
बलात्कारी र ज्यानमारालाई अझै सरकारले देखेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कुरा पत्याउने हो भने अब तिनलाई सरकारले देख्छ । अहिलेसम्म त देखे पनि नदेख्या जस्तो गर्दा ठीकै थियो । अब देखियो नै भनेपछि नदेख्या जस्तो गर्न पनि मिल्दैन । देखियो भनेपछि त्यसै छोड्न पनि मिल्दैन । समातेर थुन्नु पर्यो । कारबाही गर्नुपर्यो । सरकारले साँच्चै देख्ला कि अर्थात देखें भन्ला कि भनेर हत्यारा र बलात्कारीलाई चिन्ता छ ।
यस्तै चिन्ता छ, कामचोर कर्मचारीलाई पनि । जतिसुकै सुशासनका कुरा भए पनि टेबुल मुनीबाट पैसा तानेर खल्तीमा राख्ने बानी हटेको छैन । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती उस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुने हो भने अब टेबलमुनि पनि सरकार देखिन्छ । खल्तीमा पनि सरकार देखिन्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कामचोरहरुको अड्डामा पनि सरकार देखिन्छ । अर्थात सोझासिधा नागरिकलाई बिनाकाममा दुःख दिने र पैसा असुल्ने कर्मचारीलाई सरकारले देख्छ ।
पहिलेजस्तो देख्या नदेख्या गर्न मिल्दैन । साँच्चै देखियो नै भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता कर्मचारी आफ्ना समूहका साथीहरुसँग कानेखुशी गर्न थालेका छन् – ए के गरेको, सरकारले देख्ला !
साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेसम्म सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्री निवास बाहेक अन्त सरकार देखिएकै छैन । हाट बजारमा सरकार छैन । तरकारी बजारमा सरकार छैन । खाद्यान्न पसलमा सरकार छैन । पेट्रोल पम्पमा सरकार छैन । सबैभन्दा धेरै सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउँमा नै सरकार छैन । त्यसैले त महंगी, कालोबजारी र अनियमितता बढ्दैछ ।
प्रधानमन्त्रीले पत्याउनकै लागि भनेको हो भने अब बजार बजारमा सरकार पुग्छ । महंगी र कालोबजारी देख्छ । देखेपछि देखंँ भन्नुपर्छ । देखेँ भनेपछि कारबाही गरेँ भनेर लेख्नुपर्छ । देखे र लेखेको कुरा पूरा गरेको नागरिकले पनि देख्नुपर्छ । अनि त्यस्ता व्यापारी र व्यवसायीलाई डर हुनुपर्छ– ए के गरेको, सरकारले देख्ला !
प्रधानमन्त्रीको कुरा हावादारी होइन भने सरकार अब हावासरी भ्याट छलीहरु बस्ने ठाउँमा पनि पुग्छ । भ्याट छलेर पेटभित्र ‘फ्याट’ बढाउन खप्पिस व्यापारीहरुमा खैलाबैला हुन्छ । सरकारले देखेपछि भ्याट छल्नेहरु भटाभट समातिन्छन् । समातिने डर भएपछि भ्याट छली गर्ने ‘फ्याटे’हरुले पनि भन्नेछन् – ए के गरेको, सरकारले देख्ला ।
अनि जता हेर्यो त्यतै सरकार देखिएपछि पप्पुलगायतका ठूलाबडा ठेकेदारहरुले पनि सरकार देख्लान् । सरकारले उनीहरुलाई देख्ला । पहिले देखिँदा पनि वास्ता नगर्ने सरकारले अब साँच्चै देखें भन्ला । पापड बनाएझैँ उतिखेरै भत्याङभुतुङ हुने पुल र भवन बनाउने पप्पुहरुले सरकार देखिएला भनेर डर मान्लान् । बाटोघाटो, पुलपुलेस, घरभवन र अरु विकास निर्माणका काममा झारा टार्नेहरु तर्सिएलान् – ए के गरेको, सरकारले देख्ला ।
तर यी सबै तर्सिएकाहरुको मन अझै ढुक्क छ । किनकी प्रधानमन्त्रीको भनाईअनुसार गराई न पहिले मिलेको छ, न अहिले मिल्ने छाँट छ । देखिनुपर्ने ठाउँमा देखिन्छु भनेर सरकारले भन्नै पर्ने होइन नि । भन्नुभन्दा पहिले देखिनुपर्ने हो । तर भनिसकेपछि पनि देखिएको छैन ।
तत्काल देखिने छाँट पनि छैन । कतै देखिएकै छैन, कतै देखे पनि देखें भनेको छैन । साँच्चै देखियो भने, देखेर पनि देखें भन्यो भने अनि हामीले पनि भन्ने दिन आउँछ– ए साँच्चै सरकार देखियो नि, सरकारले देख्यो नि !
देखिनुपर्ने ठाउँमा सरकार देखिए त त्यति फरक नपर्ला । तर मन्त्रालयमा देखिने सरकार शौचालयमा समेत देखियो भने ! मिटिङ रुममा मात्रै होइन, बेडरुममै सरकार भेटियो भने ! सेटिङ स्पटदेखि डेटिङ स्पटसम्म सरकारले देख्यो भने !
अन्तिम अपडेट: मंसिर २६, २०७६
वरिष्ठ नेता पाैडेललाई फकाउन सभापति देउवा बाेहाेराटारमा !
धनुषा बम विस्फाेट : अनुसन्धानका क्रममा तीन जना पक्राउ
धनुषा विस्फोट : अपराधीलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रीको प्रतिबद्धता
नेपाल साहित्य महाेत्सवमा नारायण ढकालकाे 'तमस' सार्वजनिक
हिउँले हुम्ला सेताम्य, शनिबार घाम लागेपछि भने केही राहत
एनआईसी एसिया बैंक र फुडमान्डुबीच डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता
वैदेशिक रोजगारी : लहै-लहैमा जाँदा दुःख, बुझेर जाँदा सुख
संरक्षणकर्मीलाई स्थानीयको प्रश्न : वन्यजन्तु त संरक्षण भयो, मान्छ...
नेपाल साहित्य महाेत्सव : लेक रहे पो रहला लेकसाइड !
नेकपाको सचिवालय बैठक दिउँसाे तीन बजे बस्दै
नेपाल साहित्य महाेत्सव : शनिबार तमश लाेकार्पणसहित थुप्रै विषय...
चिसाेबाट कसरी बच्ने ?